“अब हिस्ट्री (History)को His लाई Her बनाउनु जरुरी छ”रुद्रप्रियाका वक़ील स्वागत नेपाल ( बाक़ी पढ़न यहाँ क्लिक गर्नूहोस) – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
“नेपालको हिस्ट्री (History) लाई His tory होइन (Her story) हरस्टोरी बनाउनु जरुरी छ, History मा भएको His ले पुरुषको मात्र भन्ने अर्थ दिइरहेको छ । अब हिस्ट्री (History)को His लाई Her बनाउनु जरुरी छ । अर्थात् इतिहास बदल्नु जरुरी छ, त्यो रुद्रप्रियाजस्ता रेखाहरु समेतले गर्ने हो तर जहाँ बसेर गर्न खोजिँदैछ त्यो ठाउँ शुद्ध छ कि छैन ? भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने कमलको फूल हिलोमै फुल्छ भन्ने जवाफ प्रष्ट छ । राजनीतिलाई हिलो ठान्नेहरुले पनि राजनीतिबाट भागेर यसलाई सफा गर्न सकिँदैन । फोहोरमै डुबेर भने सफा हुँदैन, महिलका हकमा यो अझ बढी गम्भीर विषय हो महिलाहरु राजनीतिमा चटनी मात्र बनाइएका छन् । शोभा बढाउनमा प्रयोग गरिएका छन् । “
रुद्रप्रियाका वक़ील र बास्तबिक वक़ील पनि तथा लेखक, कबि एवं पत्रकार स्वागत नेपालका माथीका यी भनाइ रेखा थापाको फ़ेसबुके प्रश्नको जवाफ़मा आएको हो !
रेखा थापाले हिजो एक फ़ेसबुक पोस्टमा समान अधिकार ? भन्ने प्रश्नमा महिला किन पछि परे भन्ने बारे आफ़नो धारणा उल्लेख गरेकी छन !
राजनीतिमा समेत पाइला चालेकी उनले आगाड़ी भनेकी छन – कानुनमै ३५ प्रतिशत उल्लेख छ । हामीले आफ्नो अधिकार ५० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेका छौँ । हाम्रो अधिकार हामी उपभोग गर्न सक्षम छौँ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा केवल २ जना महिलाको उम्मेदारी परेको छ।
म साह्रै दुखि छु । के हाम्रो देश पुरुषले दिने र हामी महिलाहरुले माग्ने हो ? हाम्रा हातले हाम्रै अधिकार माग्ने भएर फिजिनु पर्ने ? यो कस्तो चाकरी र माग्ने प्रथाको निरन्तरता दिईदै छ ? हामी नारीहरुको ईतिहास पुरुषको भन्दा कम छैन् । बढि छ ।
म आग्रह गर्न चाहन्छु नारीहरुले माग्ने होईन, अब दिने स्थानमा पुग्नुपर्छ । त्यसैले म यो माहोलमा छु। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले बनाएको समान अधिकार र सहभागिताको सिद्धान्तले २ जनालाई मात्रै उठाउने हो ? महिला दिदी बहिनीहरु यो आँखै अघिको अन्याय सहेर बस्ने होईन । चुनावी मैदानमा ओर्लिने हो । अधिकार मागेर होईन, लडेर लिनुपर्छ ।
हाल रेखा अभिनीत, निर्मित चलचित्र रुद्रप्रियाले बज़ारमा राम्रो ब्यापार गर्न सफल मानीएको छ । महिला माथिको एसिड़ आक्रमण बिषय रहेको सो फ़िल्ममा वक़िलको भूमिकामा रहेका स्वागत नेपालले भने -” हरेक नेपालीले हेर्नु पर्ने यो फ़िल्मलाई नेपाली राष्ट्रिय फिल्मको मान्यता दिनु ज़रूरी छ !”